30 / 01 / 2020 NTỤTA IHE, Auctions
Ulukışla Boğazköprü Line Km: passgabiga na 58 + 360 Result Result
Statelọ ọrụ ụgbọelu nke steeti Turkish State Enterprise nke abụọ (TCDD) ka enyegola ihe maka ihe nrịba ama na Nzube Ulukışla Boğazköprü Line Km: 2 + 2019 na oke nke 688316/10.459.381,16 KIK na ọnụ ahịa ịgba nke 15.820.430,31 TL na ọnụ ahịa ruru nke 58 TL. 360lọ ọrụ 60 nyefere onyinye na HAKAN KARABULUT - KARABULUT CON nkwonkwo jikọrọ ọnụ ya na ntinye aka nke 10.464.546,19. 9lọ ọrụ XNUMX na-esonye na nro a nyefere n'okpuru oke amachi.
Ihe mkpuchi ahụ mejupụtara owuwu nke 49315,25 m3 Reinforced Window rụzuru (gụnyere Transportgbọ njem), Ø413,39 - Th 14 mm Thick Ribbed steel Supply and Labour (gụnyere njem) yana ọrụ ndị ọzọ maka 32 Tons nke ihe ndozi. Ogologo oge nke oru a bu ubochi ato (iri ato na ato) site na nzipu.
Nkwupụta okike maka nnyefe ego: Gabiga na Ulukışla Boğazköprü Nweta Km: 61 + 500
Nkwupụta okike maka nnyefe ego: Gabiga na Ulukışla Boğazköprü Line KM: 58 + 360
Ulukışla Boğazköprü Nweta
Ntughari iwu na Ulukışla Boğazköprü